| Archive | SPORTS NEWS
Home » Archives by category » SPORTS NEWS
RASMI: Xiddiga Reer Brazil Ee Kooxda Santos Neymar Oo Ku Biiraya Kooxda Barcelona
Xidiga hibada loo siiyay kubada ee reer Brazil Neymar ayaa ku biiraya kooxda heysata horyaalka Spain, waxaana uu qandaraas u saxiixi doonaa maalinta isniinta. Neymar ayaa ka Barcelona xushat isagoo iska diiday dalabkii kale ee ka yimid Real Madrid ka dib markii Santos ay soo gabagabeysay seddex sanadood oo ay diidanaayeen in 21 jirkaan ay [...]
May 26, 2013No CommentRead More	Joey Barton Oo Qiray In Uu Doonayo In Marseille Toos Ugu Biiro ,QPR-na Ku Laaban
Xiddiga qadka dhexe kooxda QPR ee Joey Barton ayaa qiray in uu doonayo in uu baaqi uu ku sii ahaado si rasmi ah kooxda Marseille ee dalka Faransiiska , waxa uuna xusay in farxad aad u sareeya uu ku dareemayo kooxdaas taas oo uusan helin intii aayihiisa ciyaaraha uu ku soo jiray . Isaga oo [...]
Continue reading …	Hummels : Lewandowski Borussia Dortmund Lama Sii Joogayo , Koox Kale Ayaan Ku Arkeynaa
Daafaca kooxda Borussia Dortmund Mats Hummels ayaa xaqiijiyay in ay yar tahay maalmaha weeraryahankooda Lewandowski uu la sii joogayo kooxda marka uu eego rabitaanka laacibka ee ku aadan in koox kale uu u wareego . Tababaraha shaqada ka sii tagaya ee Bayern Munich Jupp Heynckes ayaa shirkii jaraa`id ee ka dambeeyay ciyaarta uga gacan haatiyay [...]
Continue reading …	Liverpool Oo Qiimo Sareeya Ku Dooneysa Daafaca Kooxda Schalke Ee Kyriakos Papadopoulos
Wargeyska El Mundo ee ka soo baxa Spain ayaa tilmaamaya in kooxda Liverpool ay u soo gudbiyeen kooxda schalke ee dalka Jarmalka aduun dhan 16-milyan oo gini iyaga oo ka doonaya daafaca Kyriakos Papadopoulos si uu ugu noqdo badelka Jamie Carragher kaasi oo ka fariistay ciyaaraha . Sida wargeyskaan uu qorayo Liverpool ayaa xariir la [...]
Continue reading …	Raadarka Kooxda Monaco Ee Faransiiska Oo Soo Qabtay Goolhayaha Real Madrid Ee Lopez
Wargeyska L’Equipe ee ka soo baxa Faransiiska ayaa qoraya in kooxda Monaco ay qorsheynayaan in ay si xooggan ay u galaan suuqa kala wareegga ciyaartooyda iyadoo ciyaartooyda u calaameysan uu soo galay gool hayaha kooxda Real Madrid ee Diego Lopez kaasi oo daaqada kala baxay Iker Casillas tan iyo markii uu u yimid Real Madrid. [...]
Continue reading …	Mesut Ozil Oo Dadaal Ugu Jira In Hishiis Cusub Uu U Saxiixo Kooxda Real Madrid
Xiddiga kooxda Real Madrid ee Mesut Ozil ayaa booqday mid ka mid ah xafiisyada maamulka Real ee gudaha garoonka Santiago Bernabéu iyadoo isaga iyo aabihiis ay kulan la qaateen maamulaha guud ee kooxda Real Madrid ee Jose Angel Sanchez iyaga oo ka wada hadlayay in hishiis cusub la siiyo xilli midkiisa haatan uu dhamaanayo xagaaga [...]
Continue reading …	Fiorentina: Ma Jiro Xiriir Ay Arsenal Nagala Soo Sameysay Saxiixa Stevan Jovetic
Arsenal ayaan wax xiriir ah la sameynin weli Fiorentina oo ku aadan saxiixa Stevan Jovetic, sida uu sheegay agaasimaha kooxda Viola Daniele Prade. 23 jirkaan gooldhaliyaha ah ayaa muddo dheer diirada u saarnaa tababare Arsene Wenger, waxaana Gunners ay wadahadalo hordhac ah la gashay isbuucyo ka hor ka hor inta aysan xiisaheeda dib u soo [...]
Continue reading …	Malouda Oo La Ilaaway: Chelsea Oo Ku Qasabtay Malouda Inuu Kaligiis Tababar Qaato Ilaa Dhamaadka Qandaraaskiisa
Xilligan oo kale sannadkii hore Florent Malouda waxa uu weli u dabaaldagayay koobkii Champions League ee Chelsea ay hanatay ka dib markii bedel uu ku soo galay ciyaartii Bayern Munich. Shalayto ciyaaryahanka laga tirtiray taariikhda Chelsea ee ay Allianz Arena ay ku gaareen ayaa kaligiis ku ahaa garoonka tababarka ee Cobham. Qandaraaska Malouda ayaa waxaa [...]
Continue reading …	Barcelona Oo Markii Labaad Laga Soo Diiday Dalab Rasmi Ah Oo Ku Aadan Neymar
Kooxda Santos ayaa dalabkii labaad ee ay u soo bandhigto Barcelona soo diiday oo ku aadan saxiixa Neymar, sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenka kooxda reer Brazil Odilio Rodrigues. Bluagrana ayaa ah kooxda ilaa iyo haatan la cadcad xiisaheeda ku aadan xiddiga reer Brazil, waxaana ay shalayto wadahadalo mar kale la galeen Santos iyagoo u [...]
Continue reading …	Lampard Oo Si Faahfaahsan Uga Hadlay Doorkii Benitez Ee Chelsea: Xiriir Dhow Lama Uusan Laheyn Ciyaartoyda
Frank Lampard ayaa si faahfaahsan uga hadlay doorkii tababare Rafa Benitez ee kooxda Chelsea. Ciyaaryahanka heysta rikoorka gooldhalinta Blues ayaa si qotodheer uga hadlay xiriirkii uu la lahaa tababaraha ka sii tagaya Stamford Bridge. Lampard aaana qirtay inuu lix bilood oo adag la qaatay tababarihii hore ee Liverpool intii ay wada shaqeynayeen. Wareysi gaar ah [...]
Continue reading …	Lionel Messi Oo Ku Dhiirogeliyay Barcelona Inay U Dhaqaaqdo Saxiixa Neymar
Lionel Messi ayaa aaminsan in Neymar uu wax cajiib ah ku soo kordhin lahaa kooxda Barcelona hadii uu doorto inuu u dhaqaaqo Camp Nou. Waxaa isbuucyadii u danbeysay la hadal hayay halka uu xiddiga Santos ka ciyaari doono xilli ciyaareedka soo socda, iyadoo haatan ay Barcelona isku dayayso inay wadahadal la gasho ciyaaryahanka inkastoo uu [...]
Continue reading …	Faalo: Iyadoo Carlo Ancelotti U Dhow Yahay Inuu Bedelo Mourinho, Yaa Kale Oo Liiska Ugu Jira Real Madrid
Jose Mourinho waa uu ka huleelay kooxda Real Madrid waxaana laga sugayaa madaxa Real Florentino Perez in uu keeno badelka Jose, hadaba waxaan soo qaadaneynaa tababarayaasha laga yaabo in ay badalaan iyo boqolkiiba sida ugu dhow yihiin shaqadaas. 1- Carlo Ancelotti ( heer gaarsiisan 90%). Tababarahaan ayaa aad ugu dhaw sida ifafaalada muujineyso in uu [...]
Continue reading …	Wargeys: Kolo Toure Oo Si Xor Ah Ugu Biiraya Xagaaga Liverpool
Inta badan wargeysyada Ingariiska oo ay hogaaminayaan The Sun iyo Daily Mirror ayaa saaka qoraya in Kolo Toure oo 32 jir ah inuu ku biiri doono Liverpool isagoo bedel u noqonaya Jamie Carragher oo ciyaaraha ka fariistay. Milkiilayaasha Liverpool – Fenway Sports Group – ayaa leh siyaasad ah inay la soo wareegaan kaliya ciyaaryahano da’ [...]
Continue reading …	Madaxweyne Ku Xigeenka Barca: Mourinho Waa Rabshadoole, Inuu Baxo Kubada Spain Ayay U Fiican Tahay
Madaxweyne ku xigeenka Barcelona Carles Vilarrubi ayaa weerar ku qaaday Jose Mourinho maalin ka dib markii lagu dhawaaqay inuu ka tagayo Real Madrid xagaagan, waxaana uu aaminsan yahay in bixitaankiisa ay wax fiican u tahay kubada cagta Spain. Madaxweynaha Madrid Florentino Perez ayaa ku dhawaaqay xalayto in Mourinho uu ka tagi doono Santiago Bernabeu dhamaadka [...]
Continue reading …	Napoli Oo Sheegtay In Wadahadalo Dzeko Iyo Cavani Ku Aadan Ay Kula Jirto Manchester City.
Madaxweynaha kooxda Napoli Aurelio De Laurentiis ayaa shaaca ka qaaday in kooxda Serie A ka dhisan inay wadahadalo kula jirto Manchester City oo ku aadan heshiisyada Edin Dzeko iyo Edinson Cavani. Kooxda Premier League ka dhisan ayaa dooneysa inay Cavani ka soo kaxeysato Napoli, laakiin weli dalab ma aysan soo saarin miiska. Napoli ayaa dhanka [...]
Continue reading …	Alan Pardew Oo Rajo Ka Muujiyay In Kooxda Newcastle Uu La Sii Joogayo Xilli Ciyaareedka Dambe
Tababaraha kooxda Newcastle Alan Pardew ayaa BBC-da ka sheegay in uu ku kalsoon yahay in kooxda uu la sii joogayo xilli ciyaareedka dambe inkastoo kooxdiisa xilli ciyaareedkaan xermay ku dhameysteen kaalinta 16-aad ee kala horeynta kooxaha . Alan Pardew ayaa xilli ciyaareedkii hore Newcastle ku hogaamiyay kaalinta 5-aad balse xilli ciyaareedkaan taasi uma suura galin [...]
Continue reading …	Golaha Maamulka Real Madrid Oo Kulan Ka Leh Xaaladda Jose Mourinho Iyo Kooxda
Afhayeenka kooxda Real Madrid ayaa shaaca ka qaaday in golaha maamulka kooxda ay maanta yeelanayaan kulan muhiim ah. Waxa uu afhayeenkaan u sheegay wakaalada wararka AFP in uu jiro kulankaas balse uusan la mid ah aheyn kulamadii todobaadlaha ahaa ee caadiyan maamulka kooxda ay yeelan jireen . Ilo wareed ayaa sheegaya in qabashada kulankaan uu [...]
Continue reading …	Tottenham Oo Dhaw Saxiiixa Xiddiga FC Porto Ee Joao Moutinho
Sida wargeyska The Sun ee ka soo baxa Ingiriiska uu qorayo xiddiga kooxda FC Porto Joao Moutinho uu yahay hadafka koowaad ee kooxda Tottenham kuwaasi oo doonaya in xilli ciyaareedka dambe uu u ciyaaro. Laacibkaan qadka dhexe kubadda ka sameeya ee 26-sano jirka ah ayaa u dhawaa bilaawgii xilli ciyaareedkaan soo xermay in uu ku [...]
Continue reading …	Juventus Oo Qiratay Inay Wadahadal Kula Jiraan Carlos Tevez
Beppe Marotta ayaa xaqiijiyay in wakiilka Carlos Tevez inuu u soo dhawaaday Juventus islamarkaana ay heshiis la gaari karaan. Agaasimaha guud ee kooxda Juventus ayaa la hadlayay Sky Sport Italia ka hor kulankoodii xalay ee guuldarada ay ka soo gaartay Sampdoria. “Tevez? marka laga hadlaayo tayadiisa iyo qibradiisa, ma nihin kuwii ugu horeeyay ee ogaada.” [...]
Continue reading …	Gael Clichy Oo Heshiis Cusub U Saxiixay Manchester City
Gael Clichy ayaa heshiis cusub oo afar sanno ah u saxiixay Manchester City. Daafaca bidix oo ka soo dhaqaaqay Arsenal ayaa mustaqbalkiisa u hibeeyay City ilaa 2017. “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ogolaaday heshiis cusub, waxaana indhaha ku haayaa xilli ciyaareedka soo socda” ayuu Clichy u sheegay website-ka kooxda. “Sidii aan wax u dooneynay inooma [...]
Continue reading …	Barcelona Oo Caawa Xaflad Weyn Ku Sameyn Doonta Camp Nou Ka Dib Kulankooda Valladolid
Koobka La Liga oo ah koob ay sagaalkii bilood ee u danbeysay u dagaalameysay Barcelona ayaa noqon doona waxa ugu soo jiidashada badan ee xaflada caawa ka dhaceysa Camp Nou. Koobka horyaalka ayaa durbaba dhex yaala armaajada koobabka ee Barcelona, halkaas ayuuna baaqi ku sii ahaan doonaa ilaa iyo caawa laga gaarayo xafalada weyn ee [...]
Continue reading …	Roma Oo Shaacisay Magaca Afaraad Ee Dhanka Daafaca Ka Ciyaara Ee Ay Doonayaan
Naadiga Roma ayaa bilaabay diyaarinta qorshayaashooda suuqa kala wareegga ciyaartooyda , waxa ayna doonayaan in qadka daafaca iska xoojiyaan xilli ciyaareedka dambe iyadoo xagaagaan ay aad uga sheeganayeen qadkaas daafaca. Magacyada ay bartilmaameysanayaan ayaa waxaa ugu horeeya daafaca kooxda Atletico Madrid Marcos Rocha,Adriano oo Barcelona jooga iyo Mehdi Benatia oo u ciyaara kooxda Udinese kaasi [...]
Continue reading …	Rafael Benitez : Ma Aaminsani In Aan Xagaaga Dambe Tababarayo Kooxda Everton.
Tababaraha Chelsea Rafael Benitez ayaa carabka ku adkeeyay in aysan u badneyn in uu noqdo tababaraha kooxda Everton xilli David Moyes uu dhawaan ka aaday kooxda Man United . War uu siiyay Sky Sports ayuu tababarahaan ku yiri ” ma aaminsani in aan aadayo Everton si aan u tababaro, tix gilin ayaan u hayaa kooxdaas [...]
Continue reading …	Jose Mourinho: Xilli Ciyaareedkan Waa Xilli Ciyaareedkii Ugu Xumaa Mustaqbalkeyga Ciyareed
Tababaraha kooxda Real Madrid Jose Mourinho ayaa shaaca ka qaaday in xilli ciyaareedkan 2012-13 uu yahay xilli ciyaareedkiisii ugu xumaa mustaqbalkiisa ciyaareed ka dib markii guuldarro 2-1 ay ka soo gaartay Atletico Madrid finalka Copa del Rey. Goolkii guusha ee uu dhaliyay Joao Miranda ayaa kooxda tababaraha reer Portugal u saarisay guuldarro ku soo gaartay [...]
Continue reading …	Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Mustaqbalkii Ciyaareed Ee David Beckham
David Beckham ayaa ku dhawaaqay maanta inuu ka fariisanayo dhamaadka xilli ciyaareedkan ciyaarista kubada cagta, isagoo soo gabagabeynaya mustaqbal ciyaareed oo in ka badan 20 sanadood ahaa. Hadaba waxaan eegi doonaa mustaqbal ciyaareed ee David Beckham iyo sida uu ahaa ooo sannado ah. 1975: Waxa uu ku dhashay Leytonstone, 2dii bishii May. 1991: Tijaabo ahaan [...]
Continue reading …	Xavi Hernandez: Real Madrid Si Aad U Xun Ayay U La Dhaqantay Kabtan Iker Casillas
Xiddiga Barcelona Xavi ayaa sheegay in Real Madrid ay xilli ciyaareedkan si xun u la dhaqantay saaxiibkiisa xulka Spain Iker Casillas. Goolhayaha ayaa waxaa booskiisa 1aad ka saaray tababare Jose Mourinho, iyadoo tababaraha reer Portugal uu si banaan u dhaleeceeyay kabtanka Los Blancos, isagoo ka doortay in Diego Lopez uu shabaqa u waardiyeeyo. Xavi ayaana [...]
Continue reading …	Samir Nasri Oo Qaranka Looga Yeeray Iyo Ribery Oo Ka Nasanaya Safarka Qaranka
Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Man City Samir Nasri ayaa ku soo laabtay liiska qaranka faransiiska ee kulamada saaxibtinimo ugu safraya koonfur America iyadoo tababare Didier Deschamps uu u yeeray markii ugu horeysay tan iyo markii uu qabtay qaranka . Samir Nasri ayaa ka maqnaa dhismaha qaranka faransiiska tan dhamaadkii koobkii qaramada yurub ee sanadkii [...]
Continue reading …	Antonio Conte: Waxaan Sii Joogi Doonaa Juventus, Meel Ugama Socdo.
Antonio Conte ayaa xaqiijiyay inuu doonayo inuu sii joogo Juventus, iyagoo raadinaya inay dhismahooda ka sii wadaan horyaalka Serie A oo labo sanno oo isku xigta ay ku guuleysteen. Mustaqbalka Conte ayaa isbuucyadii u danbeysay mugdi la geliyay iyadoo lala xiriirinayay kooxaha Real Madrid iyo Paris Saint-Germain, halka ciyaaryahankii hore Juventus uu sidoo kale qirtay [...]
Continue reading …	Milan Oo Lagu Waramayo In Hishiis Ay La Gaareen Xiddiga Sampdoria Ee Andrea Poli
Ilo wareedyo ayaa tilmaamaya in kooxda Milan ay hishiis la gaartay xiddiga kooxda Sampdoria ee Andrea Poli kaasi oo kooxo kala duwan raadinayeen . Waxaa la aaminsan yahay in Milan ogalaadeen in ay bixiyaan aduun gaaraya 6-milyan oo euro si ay u helaan farsamada laacibkaasi ,waxaana qarashkaasi sii raacaya hal ciyaaryahan oo Milan ah . [...]
Continue reading …	Bacary Sagna Oo U Diyaar Garoobaya In Boorsooyinkiisa Uu Ka Qaato Kooxda Arsenal
Xiddiga kubada uga qaabeeya dhanka garabka midig kooxda Arsenal ee Sagna ayaa u diyaar garoobaya in boorsadiisa uu ka qaato horyaalka Ingiriiska gaar ahaan Arsenal ka dib markii uu sii xumaaday xariirka kala dhaxeeya maamulka kooxda kuwaas oo diiday in ay hishiiska ugu kordhiyaan sharuudihiisa bilo ka hor. In Sagna ka huleelo waqooyiga London waxa [...]
Continue reading …	Man City Oo Cirka Ku Sii Shareertay Xiisaha Loo Qabo Saxiixa Arjen Robben Ee Bayern Munich
Ilo wareedyo cusub oo laga helayo gudaha Ingiriiska ayaa sheegaya in Man City ay aad u doonayaan in ay kooxda keenaan xiddiga kooxda Bayern Munich ee Arjen Robben iyaga oo soo bandhigay dalab gaaraya 20-milyan oo gini . Hishiiska kooxda Bayern Munich ay la soo galeen Mario Gotze ayaa soo dadajinaya in Bayern Munich ay [...]
Continue reading …	Tababare Jupp Heynckes Oo Shaqada Kaga Fariisanaya Kulanka Munich Iyo Moenchengladbach
Tababaraha kooxda Bayern Munich Jupp Heynckes ayaa shaaca ka qaaday in ay ka go`an tahay in shaqada tababarka uu ka fariisto dhaamadka xilli ciyaareedkaan ka dib xilli ciyaareed guulo uu kula soo hoyiyay kooxda Muncih . Jupp Heynckes ayaa yiri ” ciyaarta Moenchengladbach ayaa ah kulanka iigu dambeeya ka tababare ahaan kooxda Munich”. Gool dhaliyahaan [...]
Continue reading …	Arsenal Oo Afar Gool Iyo Hal Wigan Ugu Dirtay Kooxaha Heerka Labaad Ee Ingiriiska Iyo City Oo Badisay
Kooxda Arsenal ayaa dib u soo ceshetay booska afaraad ee kala horeynta kooxaha Ingiriiska ka dib markii ay Wigan kaga badiyeen 4/1 kulan qeyb ka ahaa wareegga 37-aad . Guushaan Arsenal ayaa Wigan u dirtay kooxaha heerka labaad ee ee Ingiriiska iyaga oo sii raacay QPR Iyo Reading ka dib markii dhibcahooda ku istaageen 35-dhibic [...]
Continue reading …	Manchester City Oo Dalab Heshiis Afar Sanno Ah U Soo Bandhigtay Isco Alarcon
Isco Alarcon ayaa lagu soo waramayaa in dalabkiisii ugu horeysay ee Manchester City uu ugu biiri lahaa xagaagan loo soo bandhigay, iyadoo miiska loo soo saaray heshiis afar sanno ah. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Manchester City ay dooneyso xiddiga Malaga xagaagan, waxaana ay diyaar u tahay inay bixiso 35 milyan euro oo ah [...]
Continue reading …	Tababare Eriksson Oo Aaminsan In Benfica Ay Farsamo Ahaan Ka Fiican Tahay Chelsea Ka Hor Finalka Europa League
Benfica ayaa farsamo ahaan ka fiican Chelsea, laakiin weli iyaga ayaa ah kuwa finalka Europa League aadaya iyagoo ka fursad yar Chelsea, sidaasi waxaa yiri macalinkii hore ee England Sven-Goran Eriksson. Tababaraha reer Sweden ayaa si wacan u yaqaana Benfica isagoo labo jeer macalin u soo ahaa kooxda hanatay labada jeer koobka kooxaha horyaalka Yurub. [...]
Continue reading …	Lionel Messi Oo Mar Kale Dhaawacmay Iyo Mudada Oo Garoomada Ka Maqnaanayo Oo La Shaaciyay
Barcelona ayaa xaqiijisay in Lionel Messi uu dhaawac muruqa ah soo gaaray islamarkaana uu garoomada ka maqnaan doono labo ilaa seddex isbuuc. Xiddiga reer Argentina ayaa la bedelay bartamihii qeybtii labaad ee kulankii ay 2-1 kaga badiyeen Atletico Madrid habeenkii axada, iyadoo laga shaki qabay inuu dib uga dhaawacmay halkii uu xilli sii horeysay ka [...]
Continue reading …	Jose Mourinho Oo Hambalyo U Diray Barcelona Iskana Indho Tiray Daaficiisa Pepe
Tababaraha kooxda Real Madrid ayaa ka dib kulankii bar bar dhaca ay kula galeen Espanyol ee qeybta ka ahaa wareegga 35-aad ee horyaalka dalkaas Spain ayaa ka hadlay dhaawaca Varane iyo arinta Pepe . Kulan wareedka ka dambeeyay ciyaarta ayuu Jose ku yiri ” dhaawaca Varane waa mid halisteeda dhex dhexaad tahay waxa ayna kaa [...]
Continue reading …	Varane Oo Laga Cabsi Qabo In Kulanka Finaalka Cope Del Rey Ee Atletico Madrid Uu Ka Maqnaado
Daafaca kooxda Real Madrid ee Varane ayaa ku qasbanaaday in laga saaro garoonka Cornella-El Prat ee kooxda Espanyol daqiiqadii 19-aad ka dib markii uu dhaawac ka gaaray jilibka . Baaritaano caafimaad oo lagu sameeyay laacibka ayaa muujinaya in dhaawaciisa culus yahay uuna aad uga sheeganayo kala baxa jilibka . Waxaa lagu wadaa in baaritaano dheerad [...]
Continue reading …	Paul Scholes Oo Si Rasmi Uga Fariisnaya Ciyaaraha Dhamaadka Xilli Ciyaareedkan
Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Man United Paul Scholes ayaa shaaca ka qaaday in si rasmi ah uu uga fariisanayo ciyaaraha marka xilli ciyaareedkaan uu dhamaado , iyadoo Paul Scholes uu horay uga fariistay ciyaayaraha May sanadkii 2011-ka ka dib markii garoonka wembley guul daro kala kulmeen Barcelona kulankii finalka Champions League. Paul Scholes ayaa [...]
Continue reading …	Stewart Downing Oo Doonaya In Liverpool La Sii Joogo Xagaaga Dambe
Xiddiga garabka uga iyaara Liverpool Stewart Downing ayaa shaaca ka qaaday in uu doonayo uu baaqi ku sii ahaado xagaagaan kooxda Liverpool sidaas oo ay tahay waxa uu qiray in tababaraha kooxda laga sugayo go`aanka rasmiga ah . Laacibkaani hore ee Aston Villa ayaa yiri ” tani wa kubadda cagta , mar waliba wadahadal ayaa [...]
Continue reading …	Barcelona Oo Ku Sii Biirtay Safka Loogu Jiro Wayne Rooney
Neymar oo u ciyaara Santos ayaa ah riyada kooxda Barcelona hadana tababare Vilanova ma diidayo in kooxda weeraryahan kale la keeno . Wargeyska El Mundo ayaa qoraya in Vilanova uu ku war giliyay madaxa ciyaaraha Barcelona Zubizarreta in uu doonayo in kooxda lagu soo jiido weeraryahanka kooxda Man United ee Wayne Rooney marka xilli ciyaareedkaan [...]
Continue reading …	Bayern Oo Maanta Koobka Bundesliga La Gudoonsiin Doono Iyagoo Dhaqanka Bavarian Ku Dabaaldegi Doona
Kooxda finalka ka joogta Champions League ee Bayern Munich ayaa ugu baaqday taageerayaasheeda inay soo xirtaan dharka dhaqanka Bavarian si ay qeyb uga noqto xaflada dabaaldega koobka Bundesliga oo maanta la guudoonsiinayo, iyadoo 22 ciyaaryahan oo hore lagu soo wareejin bas afka ka furan. Bayaren Munich ayaa qaadi koobkeedii 22aad ee Bundesliga ka dib kulanka [...]
Continue reading …	Aragti: David Moyes Ma Yahay Tababare Ku Haboon Inuu Bedelo Sir Alex Ferguson Oo U Qabto Shaqada Man Utd?
Tababare David Moyes ayaa qabtay mid ka mid ah shaqooyinka ugu adag kubada cagta caalmka isagoo bedelaya tababaraha ugu guulaha badan taariikhda Britain Sir Alex Ferguson xilli ciyaareedka soo socda. David Moyes oo Everton macalin u soo ahaa 11 sanadood ah ayaa 1da bisha July si rasmi ah u qaban doona shaqada tababare ee Manchester [...]
Continue reading …	David Villa Oo Cump Nou Uga Sii Dhamaaneyso , Atletico Madrid Ayaa Sugeysa
David Villa ayaa waxa si weyn uga war sugaya xaaladiisa Barcelona kooxo dhowr ah oo qaaradda yurub ah , waxaana ugu horeeya kooxha Atletico Madrid iyo Tottenham . Wargeyska Sport ee Spain ka soo baxa ayaa sheegaya in uu soo dhawaaday waqtigii Villa uu ka huleeli lahaa Cump Nou , iyadoo Atletico Madrid ay waqti [...]
Continue reading …	Kooxda Liverpool Oo Ku Soo Biirtay Liiska Loogu Jiro Saxiixa Son Heung-min
Kooxda Liverpool ayaa bilaawday in ay ku soo biiraan liiska kooxaha Ingiriiska ee dadaalka ugu jira saxiixa xiddiga u dhashay kuuriyada koonfureed ee u ciyaara kooxda Hamburger ee Son Heung-min. Liverpool ayaa diyaar la ah dalab maaliyadeed oo aad u sareeya oo ay ku doonayaan Son Heung-min xilli kooxda Hamburger aysan ka laba labeyn doonin [...]
Continue reading …	Wargeyska Daily Mail ayaa qoraya in daafaca kooxda Cagliari ee dalka Talyaaniga ee Davide Astori uu ku soo wajahan yahay kooxda Man City marka kala wareegga ciyaartooyda la gaaro taasina waxa ay imaaneysaa haddii tababare Roberto Mancini uu sii joogo Man City xagaaga dambe.
Wargeyska Daily Mail ayaa qoraya in daafaca kooxda Cagliari ee dalka Talyaaniga ee Davide Astori uu ku soo wajahan yahay kooxda Man City marka kala wareegga ciyaartooyda la gaaro taasina waxa ay imaaneysaa haddii tababare Roberto Mancini uu sii joogo Man City xagaaga dambe. Daafacaan u dhashay Talyaaniga ayaa sara u sii qaaday qiimihiisa suuqa [...]
Continue reading …	Xariirka Jose Iyo Taageerayaasha Real Oo Sii Xumaanaya , Mar Kale Ayaa Xalay Lagu Oriyay
Mar kale ayuu tababaraha Real Madrid Jose Mourinho kala kulmay taageerayaasha Real ku orin intii uu socday kulankii xalay ee Malaga ee qeybta ka ahaa horyaalka Spian . Qayladiii iyo ku orintii xalay ee ay taageerayaasha ku sameeyeen Jose ayaa ka xoog badneyd middii garoonka bernabeu ku sameeyeen taas oo dhacday ka hor kulankii ay [...]
Continue reading …	Wayne Rooney Oo Ka Dalbaday Man Utd In La Ii Ibiyo, Iyo Chelsea Oo Kula Biirtay Bayern Tartanka Saxiixiisa.
Kooxda Manchester United ayaa shaaca ka qaaday in Wayne Rooney uusan iib aheyn ka dib markii ay soo muuqatay in weeraryahanka uu weydiistay kooxda inuu ka tago Old Trafford markii labaad muddo seddex sanno gudaheed ah. 27 jirkaan ayaa u sheegay Sir Alex Ferguson labo isbuuc ka hor inuu dareemay in la joogo waqtigii uu [...]
Continue reading …	Mustaqbalka Sir Alex Ferguson ee Manchester United Oo Shaki Weyn La Gelinayo
Sir Alex Ferguson ayaa ka fiirsanaya inuu ka fariisto shaqada tababare ee kooxda Manchester United, sida ay ku waramayaan wargeysyo waa weyn oo Britain ka soo baxa saaka. Qaar badan oo ka mid ah wargeysyada Ingariiska ee saaka soo baxay oo ay hogaamineyso Telegraph ayaa sheeganaya in 71 jirkaan uu diyaar u yahay inuu ka [...]
Continue reading …	Man City Oo Si Rasmi Ah U Xaqiijisatay Kaalinta 2aad Ee EPL Ka Dib Guul Ciriiri Ah Oo Ay Ka Gaareen West Brom
Kooxda Manchester City ayaa si rasmi ah u xaqiijisatay booskeeda kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka Ingariiska ka dib markii ay 1-0 kaga badiyeen kooxda West Brom oo ay ciyaar adag kala kulmeen kulankii ka dhacay Etihad Stadium. West Brom oo fursad qatar ah heshay islamarkaana haleeli waayay inay shabaqa soo taabtaan ayaana ciyaar adag [...]
Continue reading …	Thiago Silva Oo Labo Kulan La Ganaaxay Iyo Leonardo Oo Laga Yaabo In Sannad Laga Mamnuuco K/Cagta
Agaasimaha kooxda PSG Leonardo ayaa laga yaabaa inuu wajaho in kubada cagta laga mamnuuco muddo hal sanno ah ka dib markii ay soo muuqatay inuu kala tuuray garsoore Alexandre Castro ciyaartii ay kooxdiisa PSG barbaraha 1-1 la galeen Valenciennes. Xiddigii hore ee Brazil ayaa si ku meel gaar ah haatan looga mamnuucay inuu sii wato [...]
Continue reading …	Carlo Ancelotti Oo Ku Wargeliyay Juventus Inay Iska Ilaawaan Inay Dib U Helaan Zlatan Ibrahimovic
Tababare Carlo Ancelotti ayaa carabka ku adkeeyay in Zlatan Ibrahimovic inuusan ka tagi doonin Paris Saint Germin xagaaga, inkastoo Juventus ay xiiseyneyso. Warar dhowr ah oo soo baxay ayaa sheegayay in xiddiga reer Sweden oo uu go’aansaday inuu ku laabto Serie A dhamaadka xilli ciyaareedkan, iyadoo Juve ay si dhow u qiimeyneyso xaaladiisa caasimada France. [...]
Continue reading …	Juventus oo ku Guuleysatay markeedii 29aad horyaalka Talyaaniga
Kooxda Juventus ayaa xaqiijisatay hanashada horyaalkeedii 29aad ee Serie A ka dib markii ay guul 1-0 ah kaga gaareen kooxda Palermo garoonka Juventus Arena. Juve ayaa ciyaartaan ka hor u baahneyd kaliya hal dhibic inay xaqiijistaan horyaalkoodii labaad ee isku xiga ee Serie A, waxaana ay taas bedelkeeda heleen seddex dhibcood ka dib guusha ay [...]
Continue reading …	United Oo Ku Soo Biirtay Kooxaha Xiiseynaya Saxiixa Xiddiga Malaga Ee Isco
Kooxda Man United ayaa dariskeeda City kula soo biirtay doonista kubad sameeyaha kooxda Malaga ee dalka Spain marka suuqa kala wareegga uu furmo sida laga soo xigtay wargeyska Daily Mirror . Xiddigaan 21-sano jirka ah ee Malaga kula jooga hishiis guud ahaan gaaraya 30-milyan ayaa soo jiitay indhaha kooxaha Real Madrid , Barcelona iyo labada [...]
Continue reading …	Super Bedel Lionel Messi Oo Barcelona Ka Saaciday Inay Camp Nou Kaga Talaabsato Real Betis
Labo gool uu dhaliyay Lionel Messi oo bedel ku soo galay ciyaarta ayaa ka saaciday Barcelona inay 4-2 kaga badiso kooxda Real Betis oo marti ugu aheyd Camp Nou, iyagoo haatan qarka u saaran hanashada horyaalka La Liga. Lionel Messi ayaa mar kale ku soo bilowday kursiga keydka, halka Busquets isna uu kursiga keydka soo [...]
Continue reading …	Gareth Bale Oo Mar Kale Guul Muhim Ah Ku Hogaamiyay Spurs Oo Sarre U Qaaday Fursadeeda UCL
Gool qurux badan uu dhaliyay Gareth Bale dhamaadkii ciyaarta ayaa ka saaciday Tottenham inay 1-0 ku garaacdo kooxda Southampton oo marti ku aheyd White Hart Lane, waxaana ay sii nooleeyeen rajadooda Champions League ee xilli ciyaareedka danbe. Ciyaartii ka dhacday White Hart Lane ayaa aheyd mid xiiso badan oo labada kooxood ay isweydaarsadeen fursado qaali [...]
Continue reading …	Ibrahimovic Oo Doonaya In Acelotti Horay Ugu Sii Raaco Real Madrid
Real Madrid ayaa dooneysa in weeraryahan kooxda keenaan xilli ciyaareedka dambe xilli dhowr magac lala xariirinayo oo ay ku jiraan Cavani iyo Luisz Suarez. Wargeyska Elconfidencial ee Spain ka soo baxa ayaa sheegaya in Zlatan Ibrahimovic weeraryahanka PSG uu ka codsaday tababarihiisa haatan ee Carlo Ancelotti in uu horay ugu sii jiido Real Madrid si [...]
Continue reading …	Gool Soo Dahay Uu Dhaliyay Pablo Osvaldo Oo Roma Ka Saaciday Inay Garaacaan Fiorentina
Gool uu dhaliyay xilliga dhimashada ciyaarta Pablo Osvaldo ayaa keenay inay Roma 1-0 kaga badiso kooxda ceyrsaneysa booska Champions League ee Fiorentina. Osvaldo ayaa madax ku dhaliyay kubad kooner aheyd ilbiriqsiyadii u danbeysay ciyaarta isagoo siiyay Roma guul ay u qalmeen oo ay ku soo galeen kaalinta shanaad iyagoo leh 58 dhibcood, waxaana ay afar [...]
Continue reading …	Barcelona Oo Milan Ka Iibineysa Fabregas Haddii 30m Ay La Yimaadaan
Bogga caanka ah Givmefootbal ee Ingriiska laga leeyahay ayaa qoraya in kooxda Barcelona ay dooneyso in ay iska iibiyaan xiddigooda Fabregas xilli laacibka uu sheegay in uu baaqi ku yahay kooxda . Kooxda AC Milan ayaa isku dayday in laacibkaas iibsadaan xiligii uu joogay Arsenal balse laacibka uu door biday in uu ku biiro Barcelona [...]
Continue reading …	Guardiola: Messi Kaliya Ma Ahan Weeraryahanka Ugu Fiican Sidoo Kale Waa Daafaca Ugu Fiican Adduunka.
Tababarihii hore ee kooxda Barcelona Pep Guardiola ayaa soo bandhigay si kale oo looga faa’ideysan karo tayada Lionel Messi, isagoo ku tilmaamay daafaca ugu fiican adduunka. Xiddiga Barcelona ayaa lagu yaqaanaa weerarkiisa isdaba jooga ah, gaar ahaan isagoo sannadkii hore dhaliyay rikoor 91 gool ah oo uu u saxiixay wadankiisa iyo kooxdiisa. Si kastaba, Guardiola [...]